तपाईँको फोनबाट नम्बरहरु डिलिट भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यसरी गर्नुस् गुगलबाट रिस्टोर - Technology Khabar
» तपाईँको फोनबाट नम्बरहरु डिलिट भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यसरी गर्नुस् गुगलबाट रिस्टोर
Technology Khabar १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार
स्मार्टफोनमा बचत गरिएको सयौं सम्पर्क नम्बरहरू डिलिट हुनुभन्दा खराब समय अरू कुनै हुन सक्दैन र यो धेरै कारणहरूले गर्दा हुन्छ। यदि तपाईँको सबै साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क नम्बर फोन हराउँदा, चोरी हुँदा वा खराबीको कारणले डिलिट हुनजान्छ भने तिनीहरूलाई पुनः सेभ गर्न धेरै समय लिन सक्दछ।
यदि तपाईको फोनबाट पनि आवश्यक नम्बरहरू हराएको छ, भने तिनीहरूलाई गुगलको मद्दतले पुन फिर्ता गर्न सकिन्छ। साथै, यदि तपाईंले गुगल ड्राईभमा सम्पर्कहरू ब्याकअप लिनुभएको छैन भने तपाईंले तुरून्त ब्याकअप गर्नुहोस्।
तपाईं गुगल स्मार्टफोन वा सिम कार्डमा सम्पर्क नम्बरहरू सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र गुगलमा सेभ गर्नुहोस्। यस पछि, यदि तपाईंले आफ्नो फोन हराउनुभयो, वा नयाँ फोन लिनुभयो भने पनि ती सम्पर्क नम्बरहरू सजिलैसँग पुन स्टोर गर्न सकिन्छ।
कुनैपनि पुरानो सम्पर्कहरू एक एन्ड्रोइड डिभाइसबाट अर्कोमा पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ।
गुगलमा सम्पर्कहरू स्टोर गर्न र रिस्टोर गर्न तपाईंले यी चरणहरू फलो गर्नुपर्नेछ-
एक्सपोर्ट गर्नुस् कन्ट्याक्टहरु (सम्पर्कहरू)
-तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको कन्ट्याक्टस (सम्पर्क) एपमा जानुहोस्।
-माथि दायाँ देखिने मेनूमा ट्याप गर्नुहोस् र सेटिंग्समा जानुहोस्।
-यस पछि तपाईले एक्सपोर्टको विकल्प पाउनुहुनेछ।
-तपाईं कुन खाताबाट सम्पर्कहरू ब्याकअप गर्ने छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
-त्यसपछि Export to .VCF file फाईलमा एक्सपोर्ट गर्नुहोस् र सम्पर्कहरू ब्याकअप बन्नेछ।
स्वचालित ब्याकअप खोल्नुहोस्
जब तपाईं नयाँ स्मार्टफोनमा गुगल खाता सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबेला गुगलले तपाईंलाई सोध्नेछ कि तपाईं फोनको डाटा गुगल ड्राइभमा ब्याकअप गर्न चाहानुहुन्छ भनेर ? यहाँ तपाईंले टगल गर्नुपर्नेछ। यस बाहेक, तपाई यसलाई आफ्नो फोनको सेटिंग्सबाट पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
-तपाईंको एन्ड्रोइड फोनको सेटिंग्स खोल्नुहोस्।
-यस पछि, सिस्टममा जानुहोस् र ब्याकअपमा ट्याप गर्नुहोस्।
-यहाँ गुगल ड्राइभमा ब्याकअपको (Back up to Google Drive) अगाडि देखाइएको टगल अन गर्नुपर्ने हुन्छ।
ब्याकपअबाट यसरी गर्नुस कन्ट्याक्टस रिस्टोर
पहिले तपाईंको फोनको सेटिंग्समा जानुहोस्।
त्यसपछि गुगलमा ट्याप गर्नुहोस्।
यहाँ सेवाहरू(Services) अन्तर्गत तपाईं सम्पर्कहरू पुनर्स्थापनाको (Restore Contacts) विकल्प देख्नुहुनेछ।
यदि तपाईले एक भन्दा धेरै एकाउन्टहरुबाट फोनमा लग इन गर्नुभएको छ भने डिभाइसले तपाईंलाई कुन खाताबाट सम्पर्कहरू रिस्टोर गर्ने भनेर सोध्नेछ ।
यस पछि, एकाउन्टमा लिंक भएको आफ्नो पुरानो फोनको नाममा ट्याप गर्नुहोस् जसको कन्ट्याक्टहरू तपाईले कपी गर्न चाहानुहुन्छ।
यहाँबाट तपाइँ सिम कार्ड र डिभाइस स्टोरेजको विकल्प पाउनुहुनेछ।
अब रिस्टोरमा ट्याप गर्नुहोस् र केही समय पछि तपाईंलाई ‘सम्पर्क पुनर्स्थापित” (Contacts restored’) लेखिएको देखिनेछ।
राम्रो कुरा के हो भने फोनमा पहिले बचत गरिएका सम्पर्कहरू पुन संग्रहित (रिस्टोर) हुँदैन, यसैले डुप्लिकेट सम्पर्कहरू सिर्जना हुँदैन।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार
स्मार्ट टेलिकमको नयाँ स्मार्ट सेन्टर काठमाडौंस्थित न्युरोडमा, सेवा तथा उत्पादनको जानकारी पाईने
इन्टरकनेक्सन शुल्क घटाउन आनाकानी गर्दै टेलिकम अपरेटरहरु, समयाबधि थप गराउन लबिङ्ग गर्दै
एप्पलको बजार मूल्य २ ट्रिलियन डलर पुग्यो, बन्यो विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका श्रृंखलाबद्ध ट्वीटहरुमा भ्रामक जानकारी भन्दै छोपिए
अनलाईन किनमेल गर्नु पहिले यी विषयहरूको बारे निश्चित हुनुहोस्, अन्यथा तपाईं ठगिनुहुनेछ